February | 2017 | Danya Wadi
By danyawadi February 24, 2017 Leaveacomment
[“Rohingya: The name, the movement, the quest for identity.” Yangon, 2013. | Jacques P Leider – Academia.edu] is good,havealook at it! https://www.academia.edu/7994939/_Rohingya_The_name_the_movement_the_quest_for_identity._Yangon_2013 Advertisements
By danyawadi February 16, 2017 Leaveacomment
February 16, 2017 ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ လူသတ် တရားခံတွေကို စစ်ဆေး မေးမြန်းချက်တွေ အရ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံမှုကို ခိုင်းစေသူဟာ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်လို့ သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ ပါတယ်။ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်ဟာ အခု ရဲက ဖမ်းဆီး စစ်ဆေး နေတဲ့ လူသတ်သမား ဦးကြည်လင်းနဲ့ ဦးအောင်ဝင်းဇော် တို့ကို ခိုင်းစေခဲ့သူလို့ သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူဟာ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ဦးအောင်ဝင်းဇော်ရဲ့ ညီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ အခုထိ ဖမ်းမမိသေးဘဲ လွတ်မြောက်နေ ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်ဟာ ဒီအက်စ်အေ အမှတ် စဉ် ၃၆ သင်တန်းဆင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၁ […]
NVC အရေး နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မှ မွတ်စ်လင်မ်များ by ဦး​ကျော်​မင်း
By danyawadi February 15, 2017 Leaveacomment
၁၃.၂.၂၀၁၇ တိရိစ္ဆာန် မျိုးစိတ် ပြုန်းတီးသွားမည် အရေးကို လူသားများက ကာကွယ်နေကြတယ်။ လူသားမျိုးနွယ်စု တစ်စု ပြုန်းတီးစိတ်သုန်းသွား ရေးကို အားလုံးသူ ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ်မည်ဟု ယုံကြည် သည်။ ရိုဟင်ဂျာများရခိုင်ခေတ်၊ အင်္ဂလိပ် ခေတ်မှာ ရှိခဲ့သည် ကိုမငြင်းနိုင်၊ ငြင်းလိုသူတစ်ချို့က၀ါဒဖြန့် စာအုပ်စာပေ များ ထုတ်ဝေနေသည်။ မွတ်စ်လင်မ် သမိုင်းအထောက် အထားမှန်သမျှကို ဖျောက်ဖျက်နေကြသည်။ မြောက်ဦးရှိသမိုင်းဝင် ဆန္ဒီခါန် ဗလီကို ရသေ့တရား ကျင့်ဂူ (Hermitage) ဟုရေးနေသည်။ ရသေ့ဂူဆိုလျှင် ၎င်း၏နှစ်ဖက်တွင် ကျောက် နံရံခံရေကန်ကြီးနှစ်ကန်ရှိရန် လိုမည်မဟုတ်၊ သမိုင်း အဆောင်ဆောင်မှာ ဘင်္ဂလားစစ် ကူဖြင့်နရမိတ်လှက ရခိုင်ထီးနန်း ကို ၁၄၂၈ ခုမှပြန်ရ ခဲ့သည် ဟု ပါရှိသည်ကို ကုလားအကူ အညီမယူခဲ့ […]
တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ပွင့်မည့် အကြောင်း ကို ခရစ်တော်က ယုံကြည်ပြီး သမ္မာကျမ်းတွင် ကြိုတင် ဟောကိန်း ထုတ်
By danyawadi February 8, 2017 Leaveacomment
#ဂျီးဆပ်ရဲ့ကြိုတင်ဟောချက်ပါဘိုက်ဘယ်ကျမ်း ဖေဖေါ်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၇ Myanmar Muslim Media တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာပွင့်ပေါ်မယ်ဆိုတာကို ခရစ်တော်ကယုံကြည်ပြီးကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက် ဘိုင်ဘယ်ကျမ်းစာကို ဗာတီကန်က စိတ်ဝင်စားနေပြီး စိတ်အားထက်သန်မှုရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၂နှစ်လုံး တူရကီနိုင်ငံမှာပျောက်ကွယ်နေခဲ့တဲ့သမ္မာကျမ်းစာအကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ နှစ်ပေါင်း၁၅၀၀ ကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ကြည့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။ ပေါင် ၁၄သန်းတန်တဲ့ ရွှေစာတွေရေးထိုးထားတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကြီးဟာ ခရစ်တော်ရဲ့မူရင်းဒေသက Aramaic ဘာသာ စကားနဲ့ရေးထိုးထားတာဖြစ်ပြီး အဲဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာ ခရစ်တော်ရဲ့အစောပိုင်းကာလက တရားဟောကြား ချက်တွေ နဲ့ တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ပွင့်ပေါ်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောကိန်းတွေပါ ရေးထိုးထားပါတယ်။ ဒီသားရေကျမ်းစာအုပ်ကို ၂၀၀၀ခုနှစ်က မှောင်ခိုတိုက်ဖျက်ရေးစစ်ဆင်ရေးအတွင်း တူရကီရဲတွေက ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်ထိ အနီးကပ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီးနောက် အန်ကာရာမြို့ လူမျိုးနဲ့ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ ပြတိုက်ကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရှေးခေတ်လက်ရေးစာမှုက သားရေစာမျက်နှာတစ်ရွက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကော်ပီ သည်ပင်လျှင် ပေါင်၁.၅သန်းခန့်တန်ကြေးရှိမယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ တူရကီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး […]
Call foraTruly Independent Investigation into the Situation in Rakhine State
By danyawadi February 7, 2017 Leaveacomment
January 18, 2017. ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို နားလည်သိရှိစေရန်၊ အမှန်တကယ်သီးခြား လွတ်လပ် သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တစ်ခုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း တာင်းဆိုခြင်း။ ဇန်န၀ါရီလ၊ (၁၈)ရက်နေ့ ၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်။ There are several competing narratives attempting to explain the complicated situation of human rights and communal tensions in Rakhine State. ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် လွန်စွာရှုပ်ထွေးလေးနက် သော လူ့ အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် စိုးရိမ်ပူပန် ရသော အခြေအနေတင်းမာမှုများစွာတို့ ကို ရှင်းလင်း တင်ပြနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသော သဘောထားအမြင် ကွဲပြား ခြားနားသည့် အခြေအနေလေ့လာသုံးသပ်ချက်များစွာ ရှိကြပါသည်။ […]
တရားလွှတ်​​တော်​​ရှေ့​နေ ဦးကိုနီ အသတ်​ခံရမှု အ​ပေါ် ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်း စုကြည်​ ဘာ​ကြောင့်​ နုတ်​ပိတ်​ ​နေရ သနည်း
မွတ်စလင် အထင်ကရ အကြံပေးရှေ့နေတစ်ဦး အသတ် ခံ ရသည့်အပေါ်တွင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်မှ လူသိရှင်ကြား ရေငုံနှုတ် ပိတ်နေ နေခဲ့ခြင်း အပေါ် တိုင်းပြည်၏ မတူကွဲပြားသည့် ဘာသာဝင်များအကြား ရပ်တည်ပြောကြားရန် သူမ၏ ၀န်လေး နေမှု့နှင့် တိုင်းပြည်၏ အင်အား အကြီးဆုံး စစ်တပ် အပေါ်တွင် သူမဘက်မှ ကာဗာပေးနေမှု့တို့အား မေးခွန်း ထုတ်စရာများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဦးကိုနီမှာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ဇန်န၀ါရီလ နှစ်ဆယ့်ကိုးရက်နေ့၌ လုပ်ကြံ ပစ် သတ်ခြင်း ကို ခံလိုက်ရသည်။ ပစ်ခတ်သူအား အခင်းဖြစ်နေရာ၌ပင် လက်ရဖမ်းဆီး မိခဲ့ပြီး လုပ်ကြံ ပစ်ခတ်သည့် အကြမ်းဖက် သမားက မွတ်စလင်တစ်ယောက်အား သတ်ပေးလျှင် သူ့အား ကားဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံပေးမည်ဟု […]
ဦးကိုနီ၏ သမီးအကြီးဆုံး ဒေါက်တာယဉ်နွယ်ခိုင် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
By danyawadi February 6, 2017 Leaveacomment
“လူတစ်ဖက်သားကို နာနာကျင်ကျင်နဲ့ အထက်စီးက ဆက်ဆံတတ်တဲ့သူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Political လုပ်နေတာဆိုတော့ သဘောထား ကွဲလွဲကောင်း ကွဲလွဲနိုင်လိမ့်မယ်” ဦးကိုနီ၏ သမီးအကြီးဆုံး ဒေါက်တာယဉ်နွယ်ခိုင် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ ဗဟိုဥပဒေအထောက်အကူပြု အဖွဲ့ဝင် ဦးကိုနီ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ သေနတ်သမား တစ်ဦးရဲ့ အနီးကပ် ပစ်ခတ်လုပ်ကြံခြင်း ခံခဲ့ရချိန်မှာ သူ့ရဲ့မြေးကလေးကို ချီထားရင်းနဲ့ လဲကျသေဆုံး သွားခဲ့တာပါ။ အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ကြံခံရစဉ်မှာ ဦးကိုနီရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်နှစ်လအရွယ် ကလေးငယ်လေးရဲ့ လက်ရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေ၊ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားချိန်မှာ မြင်ခဲ့ရသမျှတွေ၊ ကိုနေ၀င်း မိသားစုဝင်အတွက် ထပ်တူဝမ်းနည်းရမှု အကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးကိုနီရဲ့ အိမ်အပြန်ခရီးကို လေဆိပ်မှာ သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့တဲ့ သမီးအကြီးဆုံးဖြစ်သူ ဒေါက်တာယဉ်နွယ်ခိုင်နဲ့ […]